ဖတ်ဖူးသမျှဟာသများ | Mobile Master (ပခုက္ကူ-ကမ္မ)
ဖတ်ဖူးသမျှဟာသများအား ပြန်လည်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ "
ဆရာ။ ။ မောင်ပု၊ မင်းအဖေ မှာ ပိုက်ဆံ ၁၀ ရှိတယ်။ မင်းက သူဆီက ၆ ကျပ်
မောင်ပု။ ။ ၁၀ ပါ ဆရာ။
ဆရာ။ ။မင်း က သချာင်္ ကို နားမလည်ဘူးပဲ။
မောင်ပု။ ။ဆရာ လဲ ကျွန်တော်.အဖေ ကို နားမလည်ပါဘူး။
နောင်တ ညတစ်ည သန်းခေင်ယံအချိန်တွင် ဇနီးဖြစ်သူတစ်ရေးနိူးလာ၍ ယောက်ျားဖြစ်သူကို ရှာရာ မီးဖိုချောင်ထဲ၌ ရှိက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးနေသည်ကို တွေ့ လိုက်၇လေသည်။
ဇနီး။ ။ မောင်…ဘာဖြစ်လို့ ငိုနေတာလဲ
ကျား။ ။ တို့ တတွေ သမီးရည်းစားဘ၀ချိန်းတွေ တုန်းက မင်းအဖေကြီးနဲ့ မိသွားတော့ မင်းအဖေကြီးပြောတဲ့ စကားကို မင်းမှတ်မိသေးရဲ့ လား…။ မင်း ငါ့သမီးကို အတည်ယူမှာလား… မယူရင်တော့ ထောင်ထဲမှာ အနှစ်နှစ်ဆယ် သွားနေပေတော့ ဆိုတာလေ ..
ဇနီး။ ။ မှတ်မိသားဘဲ …အဲဒါဘာဖြစ်လို့ လဲ ကျား။ ။ အေး….အဲဒီတုန်းက ထောင်သာကျခဲ့ ရင် ဒီနေ့ လွတ်ပြီ ..အီး ဟီးဟီးဟီး …ရွှတ်..
မိန်းမ။ ။ ရှင်တို့ယောင်္ကျားတွလေ ကျမတို့မိန်းမတွေမရှိရင် တော်တော်စိတ်ညစ်ရမယ်၊
ယောင်္ကျား။ ။အိုမရှိမဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ငါတို့ အဲဒီဘောင်းဘီ၊ပုဆိုးတွေ ၀တ်ရတာလည်း မင်းတို့မိန်းမတွေရှိနေလို့ကွ၊မိန်းမတွေမရှိရင် ငါတို့ဘာမှဝတ်စရာ
ဗေဒင်ဆရာဗေဒင်ဆရာ "ဟေ့.. ခင်ဗျား ပိုက်ဆံမရှင်းရသေးဘူး"
ဆရာဝန် – တလောကကျွန်တော်သွားကိုက်တယ် ကိုက်တဲ့သွားကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တာ
ဖိုးသိန်း “မိန်းမ၊ မင်းနဲ့ငါပေါင်းလာတာ အနှစ်၂၀ ကျော်နေပြီ၊ စညားကတည်းက ငါမင်းကို
ဒီလိုရှင့်၊ ရှင်ကျမကို ရိုက်နှက်ပြီး
ကျင်စိန် “ပြေတာပေါ့ရှင့်၊ ကျွန်မအိမ်သာတိုက်တာ ရှင့်သွားပွတ်တံနဲ့လေ”
“ကျနော့်မှာ ဇနီးမရှိဘူး၊ ကျနော်တို့ဘာသာရေးက ကျနော်တို့ကို မိန်းမ မယူရဘူးလို့
တစ်နေ့ ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက် က ပန်းချီပြခန်းမှာ ထိုင်နေသော သူငယ်ချင်း
ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက် ကို
“သူငယ်ချင်း ပြပွဲ မှာ လူကြီးတွေက မင်းပန်းချီကားကို ဘာလို့ ပြခွင့်မပေးတာလဲကွ”
ရထားလက်မှတ်စစ်သည် တွဲပေါ်တက်လာပြီး လက်မှတ်များ လိုက်လံ စစ်ဆေးသည်။
လက်မှတ်မဲ့စီးသူများအတွက် ဒဏ်ငွေမှာ ၅၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်သည်။ အင်္ကျီလက်ပြတ်
၀တ်ထားသည့် ပထမအမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးအား
ဒဏ်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ် ပေးဆောင်စေခဲ့သည်။
နောက်ကျောပြောင်နှင့် လည်ဟိုက်အင်္ကျီ လက်ပြတ်ဝတ်ထားသော ဒုတိယ
အမျိုးသမီးကိုမူ ဒဏ်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ် ပေးစေခဲ့သည်။
နောက်ကျောပြောင်နှင့် လည်ဟိုက်အင်္ကျီ လက်ပြတ်၊ မီနီစကတ်တို ၀တ်ထားသော
တတိယအမျိုးသမီးကိုမူ ဒဏ်ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ် ဒဏ်တပ်ခဲ့သည်။
စတုတ္ထအမျိုးသမီးကိုမူ ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မယူခဲ့ချေ။ အဘယ့်ကြောင့်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။
လူအတော်အသင့်ရှိတဲ့ အရက်ဘားတစ်ခုထဲကို မိန်းကလေးတစ်ယောက် ၀င်လာတယ်။
ဆိုပြီး တော်ရုံကျယ်တဲ့အသံနဲ့ အော်ပြောလိုက်လေရဲ့.. ဘားတစ်ခုလုံးရဲ့
အကြည့်တွေဟာ ရဲနေတဲ့မျက်နာနဲ့ ကောင်လေးဆီမှာပေါ့.. ဘာမှ
ကိုယ့်နေရာကိုယ်ပြန်ပြီး ထိုင်နေလေရဲ့.. ခဏလဲနေရော ခုနှကကောင်မလေးဟာ ကောင်လေးဆီကို
“ဒီမယ်.. ရှင်စိတ်ဆိုးသွားလား.. တကယ်တော့ ကျမက စိတ်ပညာ
နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူပါ.. ယျောင်္းလေးတွေရဲ့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်သွားတဲ့
စိတ်နဲ့ အမူအယာတွေကို လေ့လာချင်လို့
“ဘာ!!!! ဒေါ်လာ ၅၀၀.. ဟုတ်လား??
“သုံည (၂) လုံးကျန်မယ်ဆရာ”
သူငယ်ချင်းများအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ဘ၀အမောတွေကို ရီမောစွာဖြင့်ပြေပျောက်နိုင်ပါစေလို့။
သမီး ။ ။ ဆောရီးပါဒက်ဒီ သမီးမနေ.ကမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တယ်
ဖခင် ။ ။။ လူဆိုးမလေး ! ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
သမီး ။ ။။ ဟုတ်ကဲ. နောက်တစ်ခါကြရင်
အိုဘားမား။။။။။။။။။စိတ်မပူပါနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ခင်ဗျား တို့ မြန်မာ ပြည်ကို ဆယ်နှစ်အတွင်း အမေရိကန်လို ခေတ် မိအောင် ကျုပ်ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ။။။။။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အိုဘားမား ကြီး ရယ် ခင်ဗျား ကျေးဇူးကို တုန်ပြန့်တဲ့ အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ အမေရိကန်ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံလို ဖြစ်သွားအောင် တစ်နှစ်အတွင်း ကျုပ်ပြန်လုပ်ပေးပါရစေ။
ယောင်္ကျား။ ။အိုမရှိမဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ငါတို့ အဲဒီဘောင်းဘီ၊ပုဆိုးတွေ ၀တ်ရတာလည်း မင်းတို့မိန်းမတွေရှိနေလို့ကွ၊မိန်းမတွေမရှိရင် ငါတို့ဘာမှဝတ်စရာ မလိုဘူးကွ´
ယောက်ျားဖြစ်သူ အရက်မူးပြီးပြန်လာသည်။ မိန်းမကတံခါးမဖွင့်ပေးချေ။
ယောက်ကျားဖြစ်သူ ဆဲဆိုပီးအော်ပြေသော်လည်း မိန်းမမှာ တံခါးလုံးဝ ဖွင့်မပေးချေ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာအချောအလှဆုံးအမျိုးသမီးအတွက် နှင်းဆီပန်းတွေ ယူလာတယ်ကွ။
မိန်းမဖြစ်သူက တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ဘယ်မှာလဲနှင်းဆီပန်း လို့ မိန်းမက မေးလိုက်သည်။
ထိုအခါ ယောက်ကျားဖြစ်သူမှ '"ဘယ်မှာလဲ ကမ္ဘာ့အချောဆုံး မိန်းမလှ" ဟုပြန်ပြောလိုက်တော့သည် ။
ရွာတစ်ရွာမှာရှိတဲ့ ဦးလေးကြီး လင်မယား ( ၂ ) ယောက်မှာ သမီး ( ၇ )ယောက်ရှိတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ခုနှစ်ယောက်မြောက် သမီးလေးက သူ့အဖေကို ပြောတယ် ။ အဖေ…သမီးမှာ ရည်းစား ရှိနေပြီတဲ့။ သမီးလက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ ၊ အဖေက သူ့သားမက်ကို အိမ်ကို ခေါ်ခဲ့ပါဦး သူကြည့်ရအောင်တဲ့။ ဒါနဲ့ သမီးလည်း ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ခေါ်လာတဲ့ အခါ သူ့အဖေက မင်းက ငါ့သမီးကို လက်ထပ်ချင်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ မင်းက ဘယ်နယ်ကလဲကွဆိုတော့ သားမက်လောင်း ပြောလိုက်တာက
ကျွန်တော်က ” သုံးဆယ် ” ကပါလည်းဆိုရော ကောင်မလေး အဖေ ပါးစပ်က ဟေ………xxxxxxxxxxx
ဒီလောက် မီးပျက်မယ်မှန်း သိရင် အချစ်ရဲ့
မျက်နှာလေးကို တ၀ကြီး နမ်းပစ်တာပေါ့
“ဟင်....ဒါဖြင့် မီးပျက်တုန်းက နမ်းတာ
ကိုကို မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် ။”
“ဟဲလို ဟဲလို ကျမကို ကူညီပါရှင်
ပလာဇာမှာဈေးဝယ်ပြီး တက္ကစီနဲ့ အိမ်ကို
ပြန်လာတာ ကားပေါ်မှာ အ၀တ်အစားတွေ
ပါသွားလို့ အင်္ကျီတွေက တထည်ကို သုံးသောင်း
ဒါ့ထက် ယာဉ်နံပါတ် မသိရဘူးလား ခင်ဗျာ”
“သိပါတယ်ရှင် ရင်၃၆ ၊ ခါး၂၂ ၊ တင် ၃၈
"ငါက တူနဲ့ မစားဘူး